Wondershare Ngwọta | Chọta azịza gị Tech Nsogbu Taa
A zuru ngwọta naghachi ehichapụ kọntaktị, ozi, foto, ndetu, wdg si iPhone, iPad na iPod aka. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 8.3, iPhone 6 na iPhone 6 Plus
Nyefee na kọntaktị, ozi ederede, oku na ndekọ, kalenda, photos, music, video na ngwa n'etiti iPhone, Android, Nokia (Symbian) ntị na Blackberry - ke kiet ke otu click! Newly akwado iCloud ndabere ka Android. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 8.1, na Android 5.0 Lollipop
Hichaa gị onwe data on iPhone, iPad na iPod aka na-adịgide adịgide ma doo anya na junk faịlụ. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 8.3, iPhone 6 na iPhone 6 Plus
Copy music, listi ọkpụkpọ, videos si iPod, iPhone & iPad ka iTunes Library, gị na PC maka ndabere. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 8, ​​ma na-akwado iPhone 6 & iPhone 6 Plus Gbalịa TunesGo Ochie>
A ezigbo oge dijitalụ audio edekọ na dere ọ bụla ọdịyo isi iyi ahụ na-akpaghị aka achọpụtala na kọmputa gị. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1
Ebuli gị iTunes na obodo music n'ọbá akwụkwọ na nanị otu click. Chọta efu ozi maka gị music na batches. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1
Gbalịa Video Editor>
Ọkụ gị videos, audios na ihe oyiyi ike DVD na enyemaka nke a mfe iji ma ike n DVD Okike.
Kasịnụ software ikpa foto gị na obere vidiyo n'ime a pụtara DVD ngosi mmịfe na-eso ndị enyi gị.
Copy music, listi ọkpụkpọ, videos si iPod, iPhone & iPad ka iTunes Library, gị na PC maka ndabere. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 8, ​​ma na-akwado iPhone 6 & iPhone 6 Plus
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ kọntaktị, ozi, foto, ndetu, wdg si iPhone, iPad na iPod aka maka Mac ọrụ. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 8.3, iPhone 6 na iPhone 6 Plus
Nyefee n'elu niile nke gị data - gụnyere kọntaktị, ozi ederede, oku na ndekọ, photos, music, videos na ngwa - na-adịghị ize ndụ ma ọ bụ ọnwụ nke àgwà. Ofụri Esịt dakọtara na iOS 8.2, na Android 5.0 Lollipop
Full nnwere onwe nyefee music na listi ọkpụkpọ site na iPhone, iPad na iPod ka iTunes Library on Mac. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 8, ​​ma na-akwado iPhone 6 & iPhone 6 Plus Gbalịa TunesGo Ochie (Mac)>
Dr.Fone N'ihi na iOS (Mac) - Naghachi data si iPhone.
Dr.Fone N'ihi na iOS (Mac) - Naghachi data si iPhone / iPad.
Zuru okè iTunes enyi iji hazie gị niile music collections. Chọta efu ọmụma, album artwork na lyrics mfe. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1
Dr.Fone N'ihi na iOS (Mac) - Naghachi data si iPhone / iPod.
Gbalịa Video Editor for Mac>
Full nnwere onwe nyefee music na listi ọkpụkpọ site na iPhone, iPad na iPod ka iTunes Library on Mac. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 8, ​​ma na-akwado iPhone 6 & iPhone 6 Plus
Nyefere unu AJỤJỤ
Nwere ike ịhụ ihe ngwọta dị gị mkpa? Nanị n'okpuru gị ajụjụ n'okpuru, na anyị ga-enyere gị chepụta ihe ngwọta kasị mma gị tech nsogbu. Na mgbakwunye, anyị ga-enye gị a 20% Gbanyụọ ego kwupụta na-atụ aro Wondershare ngwọta.
Daalụ Echiche e osụk ọma
Daalụ maka ẹsụk gị ajụjụ. Anyị Tech ije ga gwa gị site email ma nye gị na ihe ndị kasị apụtakarị ngwọta nsogbu gị anya. Nọrọ na-ekiri na Wondershare Ngwọta.